SAVOROVORO NANDRITRA NY LALAO TAO ALAOTRA : Mila fitsaboana ny taranja basket-ball
Azo ambara fa isan’ny niteraka resabe teny anivon’ny taranja basket-ball ny nisian’ny savorovoro nandritra ny lalao famaranana izay natao tao amin’ny kianja « Maôtre Zaka » ny zoma 14 avrily lasa teo iny. 19 avril 2017
Ny mpitsara ny lalao mihitsy no voakasi-tanana teny am-pamaranana ny lalao izay voalaza fa tsy maintsy haverina ny sabotsy 15 avrily noho ny fahamaizinan’ny andro.
Karazan’ny efa lonilony mihitsy ary efa niotrika ela ny olana ka rehefa nisy ny zavatra tsy azoazo dia nipoitra avokoa ny hatezerana ho an’ireo mpankafy ity taranja ity.
Hatrany am-boalohany dia efa hita ho nafampana ihany ny mari-pana ho an’ireo mpilalao.Raha nisy ny fivoriana ho fandaminana ny raharaha ao anatin’ny lalao sy ny famahana ny olana dia nanambara ny filohan’ny Ligy fa « efa milamina tanteraka ny olana rehetra ary inoana fa hizotra an-tsakany sy an-davany ny lalao sisa ». Nisy anefa ireo tarika izay tsy nankasitraka ny fizotran’ny lalao teny an-tenantenany ary nametraka fitarainana izay nambaran’ny tompon’andraikitra fa tsy misy mitombina.
Na izany aza samy tafakatra niady ny lalao famaranana sy ny laharana fahatelo avokoa ireo tarika roa ireo dia ny Angaredona sy ny AS Saint-Pierre. Ity farany izay nifandona tamin’ny B.B.C.A.
Mahakasika izay sehatry ny fanatanjahantena izay ihany dia betsaka no milaza fa mila fitsaboana ny seha-panatanjahan-tena aty Ambatondrazaka amin’izao fotoana izao noho ireo karazana olana izay miseho lany etsy sy eroa. Isan’ny ahenoana izany ny ao amin’ny ao amin’ny baolina lavalava sy ny taranja basket-ball ary fantatra fa mbola misy ihany koa ny taranja hafa izay hiaran’izany.